» ‘छाती पिटेर श्रीमती रोइरहँदा कफिनको लास किन बोलेन ?’
‘छाती पिटेर श्रीमती रोइरहँदा कफिनको लास किन बोलेन ?’
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०२:०१
हेटौँडा, १० जेठ । कक्षा २ मा नेपाली विषय पढाईरहनुहुँदा गुरुले कालोपाटीमा लेख्ुनुहुन्छ –‘ठूलो भएपछि के बन्ने ?’ कसैको जवाफ डाक्टर, कसैको लाहुरे अनि कसैको शिक्षक र पाईलट, यस्तै जवाफ आउँछ साना विद्यार्थीहरुबाट । त्यही बेला एउटा विद्यार्थी उठ्छ अनि ‘हिरो’ लेखिएको कागज देखाउँछ । त्यसको लगत्तै एउटी छात्रा उठ्छिन् अनि उनले ‘हिरोको बुढी’ लेखिएको कागज देखाउँछिन् । त्यही जोडीको पछि बिहे हुन्छ, बिहेको केही समयपछि दुई जिउकी श्रीमतीलाई छोडेर हिरो बन्ने चाहाना बोकेका श्रीमान सबै सपनालाई त्याग्दै सुमोको छतमाथि बसेर विदेश जान्छन् । श्रीमतीले छिट्टै फर्केर आउनु है भन्ने चिट पाएको ऊ फर्किँदा कफिनमा प्याक भएर सुमोकै छतमाथि फर्कन्छ, तर निर्जिव लास बनेर ।
यो कारुणिक दृश्य हो अहिले युट्युब ट्रेण्डिङको नम्बर १ मा पर्न सफल गीत ‘बोल माया..’ को । यो गीतलाई यो समिक्षा तयार पार्दाको समयमा १२ लाख १३ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । र यो क्रम बढ्दो छ । यो गीतको संगीत र शब्दलाई गायक तथा मोडल प्रकाश सपूतले जति मार्मिक बनाएका छन् त्यसलाई अन्याय नहुने गरि शब्दलाई दृश्यमा भिजाउने अनि दर्शकको आँखा रुझाउने गरि भिडियो तयार पारेका छन् । गीतको शब्द सुन्दा र भिडियो हेर्दा यस्तो प्रतित हुन्छ कि वास्तवमा त्यसको कलाकार हामी आफै हौँ, अनि त्यो कथा र त्यो बेदना हाम्रा आफ्नै हुन् । भिडियो हेरिरहँदा श्रीमान लास भएर फर्किएको दृश्यदेखि नै सुरुमै दर्शकको मन भावुक हुन्छ त्यसैले मैले समिक्षालाई त्यो पिडाभन्दा परबाट सुरु गरेँ जहाँ लास बनेका युवक र उनकी श्रीमतीको प्रेमिल बालापन समेटिएको छ ।
प्रकाशको शब्दलाई उनीसहित नारायण रायमाझी र शान्ति श्री परियारले भावमा डुबेर आवाज दिएका छन् । शान्तिको आवाजमा मिसिएको रोदनले गीतलाई थप भावुक बनाईदिएको छ । म्यूजिक भिडियोमा प्रकाश आफै कफिनमा लास बनेका छन्, लास बनेर कफिनमा सुत्दा उनले आफ्नो बुवाले मलेसियाबाट चिनोका रुपमा लिएर आएका पहिरनलाई लगाएका छन् । अनि श्रीमतीको भूमिकामा अञ्जली अधिकारीले जीवन्त अभिनय गर्दै दर्शकलाई रुवाएका छन्, आफु सँगै । बाध्यतामा कमाउन भनि विदेश गएका श्रीमान गुमाउनुको पिडा, धर्ती नटेकेको गर्भको निर्दोष शिशुले बुवाको मुख हेर्न नपाएका कारुणिक दृश्यलाई करन चैँसिरले क्यामेरामा कैद गरेका छन् । प्रकाशकै निर्देशनमा बनेको म्यूजिक भिडियोमा देखिएका अन्य पात्रहरु प्रकाशकै आमा र भाईहरु हुन् । साराङ्गी बजाउँदै सितारे गन्धर्वले पनि भिडियोमा दरिलो उपस्थिति जनाएका छन् । अनि बालकलाकार डिपलभ वि.क. र खुशी थापाले रमाईलो अभिनय गरेका छन् ।
आफ्नै जीवन भोगाई, बाल्यकालमा हिरो बन्ने सपना, कयौँ लासलाई कफिनमा गाउँ सम्म पुराउँदा बखतका तिता पलहरुलाई गायकले भिडियोमा जस्ताको तस्तै उतारेका छन् । हजुरबुवा बित्नुहुँदा हजुरआमाले कारुणिक स्वरमा भाका हाल्नुभएका लयलाई उनले गीतको क्लाईमेक्समा उतारेका छन् अनि बाग्लुङमा आफ्नै गाउँमा भिडियो छायाँकन गरेका छन् । छायाँकनका क्रममा गाउँलेहरु समेत रोएको दृश्य देखिन्छ जुन वास्तविक र सजिव लाग्छन् । गीतका शब्दहरुले हामी सबैलाई रुवाउँछ । एउटी श्रीमतीले श्रीमानको अकल्पनीय मृत्यूपछि झेल्नुपर्ने सामाजिक बहिस्कारका पिडाहरु, प्रेमका वाचाहरु, परिवारले देखेका सपना अनि संगै जिउने अपुरो चाहानालाई शब्दमा कारुणिक रुपमा समेटिएको छ । रुँदा–रुँदा श्रीमानको लासलाई अंगालो हालेर श्रीमती रोएको दृश्य हेरिरहँदा हाम्रो मनबाट एउटै आवाज बारम्बार आउँछ–‘छाती पिटेर श्रीमती रोइरहँदा कफिनकमा लास बनेको श्रीमान किन बोलेन ?’ किन यति निष्ठुर भयो दैव ? किन यस्तो घात गर्यो जीवनमा नियतिले ? क्लाईमेक्समा श्रीमान बाँचेको देखाइदिएको भए पनि हुने ।’ यस्तै मनोदशासँगै भिडियोको अन्त्य हुन्छ ।
गीतमा प्रयोग गरिएको गोपाल देवको बाँसुरी, धर्म गन्धर्वको साराङ्गी र खर्क बुढाको मादलको शोक धुनले दिमागलाई खाली बनाएर गीतसँगै बगाउँछ । त्यसो त गीतको शब्द, आवाज र संगीतले एकोहोरो रुवाई रहे पनि म्यूजिक भिडियोले भने केही प्रेमिल अनुभवमा समेत दर्शकलाई तानेर लान्छ । भिडियोका मुख्य पात्रहरुको बालापनको प्रेम र भिडियोमा प्रस्तुत गरिएका शब्द र नायक र नायिकाको चिट आदान प्रदानलाई कलात्मक बनाइएको छ । बाँकी कुरा तपाईलेँ यो गीतको भिडियोमै हेर्न सक्नुहुनेछ ।